Forum serasera malagasy Visa schenghen: mes critiques et comment je fais pour "contourner" cet obstacle - Dinika forum.serasera.org
Visa schenghen: mes critiques et comment je fais pour "contourner" cet obstacle
Fitohizan'ny hafatra : Visa schenghen: mes critiques et comment je fais pour "contourner" cet obstacle
charminggirl5 - 15/06/2020 06:46
rhaj0 - 15/06/2020 13:04
Toa ny ahoana ny any New Zealand any ny @ ireto
1- tambazotran'ny fahasalamana.
Voaantoka ve ny fankanesana any @ dokotera sy ny fanafody (toa ny ao Frantsa, na ny ampahany raha ny aty Kanada), sa samy mandeha samy mitady (toa ao Etazonia)
2- rehefa hisotro ronono.
Mahazo ampahafirin'ny karama azo fony niasa ohatra ny mpiasa mandeha misotro ronono eo @ faha-60 taonany, nahavita niasa eo @ 20 taona teo.
Ny aty Kanada, raha mpiasam-panjakana, dia mety eo @ 3/4 na mihoatra. Raha miasa ho an'ny tena na @ orinasa tsy miankina, dia mety hahazo eo @ 1/5 na latsaka eo; fa izay voaangonao tao no ho hivelomanao
3- finoana sy fivavahana moa no eto.
Beantitra sy mpiavy fotsiny koa ve no mameno ny fiangonana any (toa ny aty Kanada)?
Dia mamely mafy koa ve ny Evanjelisitra any, manambaka ny mpino @ izao fametraha-tanana izao sady maka volan'olona aman-tapitrisany no miaina anaty lapa volamena? (toa ny ao Etazonia. Misy mitady hivohy an'ireo aty Kanada fa vitsy an'isa.)
Dia mahatsindry aloka ve izy ireo eo @ politika (toa ny ao Etazonia)?
Dia mahatsindry koa ve ny Kristianisma sy ny fijeriny ny @ fanalan-jaza, fiarahan'ny samy lahy/vavy, ny fanalana ny aina raha mararibe ambavahoana (euthanasie)? Toa ny ao Etazonia. Misy mitady hivohy an'ireo aty Kanada fa vitsy an'isa.
(Mobla metsaka ny fanontaniana, fa raha valianao ireo dia efa isaorana betsaka mialoha.
Dia ireo namana any @ Firenena hafa koa ve afaka mifampizara traikefa eto?)